Home News Shiikh Sharif: Wixii intaan ka danbeeya lagama amuusi kari dulimiga dowlada wado....
Shiikh Sharif: Wixii intaan ka danbeeya lagama amuusi kari dulimiga dowlada wado. Dalka ayaa danbi laga galayaa?
Madaxweynihii hore ee ku sagnaa magaalada Nairobi mudo sadax cesho ah ayaa waxa uu ka wadaa kulamo gooni gooni ah oo uu la yeelanayo mucaadka dowlada ee joogo magaagalada Nayroobi. Kulan ayuu habeenkii xalay ahaa ku qabtay hotelka cusub ee loo yaqaano Movenpick oo dhawaan laga furay magaalada Nayroobi. Kulankaan oo goob joog ka ahaayeen xildihibaano mucaarad ku ah dowlada iyo qaar sheegta in ay hadda la jiraa ayuu Shiikh Sharif u sheegay in wadanka ayan dowlad ka jirin, waajib islaami ahna ay tahay in laga hortago dulmiga lagula dhaqamayo shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu yiri “ Wixii intaan ka danbeeya hadii laga amuuso dulimiga dowlada wado, umadda Soomaaliyeed danbi ayaa laga galayaa” waxa uu ku daray “ lama fiirsan karo sida loogu ciyaarayo dowladnimadii aan sida aad ogtihiin ku soo dhisnay”
Waa markii ugu horeeysay oo uu Shiikh Sharif madal qarsoon u sidaas uga hadlo isaga oo ka soo horjeedo dowlada Farmaajo. Shiikh Sharif ayaa sheegay in uu dhawaan xisbi uu ku dhawaaqi doono. Waxa uu hadalkiisa ka mid ahaa .. “sida ay u muuqato Farmaajo ma sii haysanayo hogaan dalka inta uu Xassan Kheyre iyo Fahad ka talo qaato waa in aan u diyaar garoownaa sidii aan talada ula wareegi lahayn. Kulankaan oo ahaa mid qarsoodi ah, tiro kooban lagu martiqaaday ayaa ay u muuqday mid uu rabay Shiikh Sharif in uu ku muujiyo mowqifkiisa ku aadan dowlada Farmaajo.
Previous articleDEG DEG:Putland oo soo bandhigtay Ciidan Aad ufarabadan oo ka qeyb qaadanaya Dagaalka Tukaraq
Next articleAxmed Madoobe oo Amray in labixiyo Darajooyinka Ciidanka
Turkiga oo laga yaabao in uu aqbalo codsi Soomaaliland u dirtay
Wasiir Cawad”inaga ayaa u fasaxnay in kenya Xafiis ka furato Hargeeysa”...